Bacteriology | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Bacteriology | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Archives ho an'ny siansa sy ny natiora / siansa / biolojia / Bacteriology
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Mycobacterium Tuberculosis sy Mycobacterium Bovis
6 aogositra 2021 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Mycobacterium tuberculosis sy Mycobacterium bovis dia ny Mycobacterium tuberculosis dia tsy misy afa-tsy olona ihany no voan'ny Mycobacterium bovis, na olona na biby fiompy. Mycobacterium tuberculosis sy Mycobacterium bovis dia karazany roa voasokajy ao amin'ny sokajy Mycobacterium. Mycobacterium dia karazana Actinobacteria. Misy karazany 190 mahery amin'ity karazana ity. Misy karazana […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Schizophyta sy Cyanophyta
3 aogositra 2021 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'i Schizophyta sy Cyanophyta dia ny Schizophyta dia vondrona taloha amin'ny fanasokajiana izay misy kilasy roa toy ny Schizomycetes (bakteria) sy Myxophyceae (ahidrano maintso manga) raha Cyanophyta kosa dia vondrona vaovao amin'ny fanasokajiana izay tsy misy afa-tsy Myxophyceae (ahidrano maintso manga ). Ny bakteria sy ny cyanobacteria dia vondrona roa misy zavamiaina prokaryotic. Ny ankamaroany […]
Fahasamihafana eo amin'ny Bacillus Subtilis sy Bacillus Cereus
23 Jona 2021 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Bacillus subtilis sy Bacillus cereus dia ny Bacillus subtilis dia manangona mannitol, saingy tsy manana ny fahaizana mamokatra lecithinase anzima raha ny Bacillus cereus kosa tsy manasitol mannitol, fa mamokatra lecithinase anzima. Bacillus dia karazana bakteria miendrika gram, miorina amin'ny gram. Mpikambana ao amin'ny phylum Firmicutes izy ireo. Misy 266 ny anarany […]
Fahasamihafana eo amin'i Pseudomonas sy Staphylococcus
7 aprily 2021 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'i Pseudomonas sy Staphylococcus dia i Pseudomonas dia karazana Gamma-proteobacteria miendrika Gram-negatif an'ny fianakaviana Pseudomonadaceae raha i Staphylococcus dia karazana bakteria spherical Gram-positive an'ny fianakaviana Staphylococcaceae. Pseudomonas sy Staphhlococcus dia karazana bakteria roa manan-danja amin'ny klinika. Pseudomonas dia karazan-bakteria miendrika tsorakazo, misy polar-flagellated miaraka amina sporulate […]
Fahasamihafana eo amin'ny Neutrophile Acidophiles sy Alkaliphiles
22 Oktobra 2020 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny neutrophile acidophiles sy alkaliphiles dia ny acidophiles dia microorganism izay maniry amin'ny pH akaiky ny 3 raha neutrophiles kosa dia microorganism izay maniry amin'ny pH akaikin'ny neutre na 7 ary ny alkaliphiles dia microorganismes izay maniry eo anelanelan'ny pH 8 ka hatramin'ny 10,5. Mila fepetra manokana ny mikrôba amin'ny […]
Fahasamihafana eo amin'ny Treponema Borrelia sy Leptospira
30 Jolay 2020 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny treponema borrelia sy leptospira dia ny Treponema izay miteraka sipilis ary ny Borrelia no miteraka aretina Lyme sy ny tazo mivaingana, fa ny Leptospira kosa dia miteraka leptospirosis. Spirochetes dia bakteria motile miendrika spiral lehibe. Izy ireo dia an'ny baiko Spirochaetales. Misy fianakaviana roa amin'ity baiko ity i Spirochaetaceae sy Leptospiraceae. Borrelia sy Treponema dia razambe roa an'ny […]
Fahasamihafana eo amin'i E Coli sy Serratia Marcescens
22 Jolay 2020 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny E coli sy Serratia marcescens dia ny E. coli dia bakteria coliform izay an'ny genes Escherichia ary ampahany amin'ny flora tsinay ara-dalàna raha Serratia marcescens kosa bakteria miendrika grama-ratsy manana fahaizana mamokatra mena loko loko amin'ny hafanan'ny efitrano. E.coli sy S. marcescens […]
Fahasamihafana eo amin'ny Neisseria Gonorrhoeae sy Neisseria Meningitidis
4 Mey 2020 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Neisseria gonorrhoeae sy Neisseria meningitidis dia ny aretina Neisseria gonorrhoeae dia mampiseho fihanaky ny maro sy ambany fahafatesan'ny olona raha toa kosa ny aretin'ny Neisseria meningitidis mampiseho fatra ambany sy mety maty ny ankamaroan'ny bakteria dia tsy manimba. Na izany aza, ny karazana sasany dia biby mikraoba, zavamaniry ary zavamananaina velona hafa. Neisseria gonorrhoeae sy Neisseria meningitidis dia […]
Fahasamihafana eo amin'ny Campylobacter sy Helicobacter
13 aprily 2020 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Campylobacter sy Helicobacter dia ny Campylobacter dia karazana bakteria gram-négatif izay koma na miendrika s ary manana flagellum polar tokana, raha Helicobacter kosa dia karazana bakteria miiba-gram izay miforitra na tsorakazo ary manana flagella marobe. Campylobacter sy Helicobacter dia karazan-tsolika mikraoba ratsy (…)
Fahasamihafana eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae
7 aprily 2020 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae dia ny Klebsiella pneumoniae dia bakteria miendrika tsorakazo miiba gram raha Streptococcus pneumoniae kosa dia bakteria miabo tsara, tsy misy motera ary tsy mitondra oval na boribory miendrika spherical. Samy Klebsiella pneumoniae sy Streptococcus pneumoniae dia bakteria roa samy hafa izay miteraka pnemonia, ary karazana aretina hafa. Ireo karazana bakteria roa ireo dia mahomby […]
Fahasamihafana eo alohan'ny fanambadiana sy aorian'ny fanambadiana
Fahasamihafana eo amin'ny piraty sy ny tsy miankina
Fahasamihafana eo amin'ny privatisation sy ny famoahana vola
Fahasamihafana eo anelanelan'ny creamy Bavarian sy ny creamy Boston
Fahasamihafana eo amin'ny Punk sy Goth ary ny Scene